चैत्र २५, २०७६, मंगलबार
कोरोना नामको प्रकोपः पूर्वतयारीका २ महिने मौका र हाम्रो आँकलन
असिम भूसाल, चैत्र १२, २०७६
अहिले नेपाल लकडाउन छ । कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनेको चीन पुरानो सामान्य अवस्थामा फर्किँदै छ भने चीन छट्पटीमा हुँदा नेपथ्यमा बसेर हेरेका देशहरूमा कोरोना भाइरसले बल्ल ठूलो समस्याको रूपलिँदै छ। नेपालमा फ्रान्सबाट आएकी एक नेपाली युवतीलाई कोरोना देखिएपछि सरकारले अलिककदह्रो...
प्राथमिकतामा काठमाडौँमा मेट्रो रेल कि गाउँलाई आधारभूत आवश्यकता ?
असिम भूसाल, मंसिर ६, २०७६
८१ वर्षअघि खरानी भएको छाङ्सा
असिम भूसाल, भदौ २६, २०७६
छाङ्सा चीनको २३औँ प्रान्तहरूमध्येको हुनान प्रान्तको राजधानी हो । चीनको इतिहासमा छाङ्साको ठूलो भूमिका छ । छाङ्सा शहरलाई सियाङ नदीले बीचबाट छुट्याएको छ खोलापारि पूर्व र खोलावारि पश्चिम । अझ बुझिने गरी भन्दा वर्तमानमा खोलाको पूर्वपट्टि गगनचुम्बी भवन, अपार्टमेन्ट, सपिङ...
असिम भुसालः ‘थिंग बु दोंग’लाई ल !
असिम भूसाल, श्रावण २६, २०७६
चीन यात्राका लागि पहिलो पल्ट नेपाल छोड्दा मनमा उत्साह थियो, एक अनौठो खालको रोमाञ्च थियो । अध्ययनका लागि नजिक र सहज यात्रा अनि भाषा र संस्कृतिसमेत उस्तै भएको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको अवसर छाडेर म हुनान विश्वविद्यालयतिर हानिएको थिएँ । काठमाडौं...
अनलाइन सपिङः बन्न सक्छ हुलाकको शान र मान फर्काउने माध्यम
असिम भूसाल, असार २९, २०७६
बि.स.१९३५ मा स्थापना भएको नेपालको हुलाक सेवा कुनै बेला देशको महत्वपुर्ण खवर आदन प्रदानको साधन थियो । खवर वा समाचारको माध्यम, चिठी पत्र ओसार पसार गर्ने माध्यम । मलाई आज पनि झल्को आउछ, म सानो हुँदा हुलाकी दाइलेले हाम्रो संगोलको...
नेपालले चीनको विकासबाट सिक्नुपर्ने पाठ
असिम भूसाल, असार ९, २०७६
म पहिलोपल्ट चीनमा आउँदा नेपालमा बिमस्टेक बैठक चलिरहेको थियो । काठमाडौँबाट चीनको दुरी धेरै छैन । तर, नेपाल र चीनबिच विकासको ठुलो खाडल छ । हामीले सोचेको, सुनेको र पर्दामा देखेकोभन्दा धेरै खाडल अनुभव गर्न सकिन्छ । उत्तरी छिमेकीको विकासको...
प्राकृतिक द्वन्द्व, मूर्खे बल र सुरक्षित मानव समुदायको ‘मिसन’
प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा जनस्तरमा उठेका प्रश्नका बारेमा उचित छानबिन गर्छु /गराउँछु भन्ने थियाे, ओठे जवाफ हाेइन
अविश्वासै अविश्वासको समय
अस्पतालको ५७ औ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सुक्षा सामग्री सहयोग
व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाउन महासङ्घको आग्रह
कोरोना विरुद्ध लड्ने सरकारको यस्तो छ तयारी, प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ